Iran: Tandindonin-doza Ny WhatsApp, Line sy Tango – Tsy Mifanara-tsaina Ny Filoha Sy Ny Fitsarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2015 8:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, čeština , Français, English
Manjavozavo ny hoavin'ireo fandefasana hafatra toy ny WhatsApp, Line, sy Tango ao Iran hatramin'ny nanambaràn'ny fitsaràna ao an-toerana ny fanapahankevitra iray hanivana ireo fampiasa telo ireo. Ny 07 Janoary, nandà tsy haneho hevitra mikasika izany ny minisitry ny kolontsaina sy ny taridàlana Silamo.
Araka ireo tatitry ny masoivohom-baovaom-panjakana ao Iran, heverina hiditra hanan-kery avy hatrany ilay fanapahankevitry ny fitsaràna taorian'ny nanambaràna azy tamin'ny 7 Janoary. Tsy miankina amin'ny biraon'ny filoham-panjakana ny rafi-pitsarana ao Iran, fa manao tatitra fotsiny any amin'ny Mpitondra Faratampony, Ayatollah Khomenei.
Tao anaty fanambaràna iray ho an'ny daholobe nataony ny 17 Janoary teo, nolavin'ny Minisitry ny Kolontsaina, Ali Jannati, ny hiteny hoe ny governemanta no nanomana ny fametrahana fandraràna ny tolotr'ireo fampiasa telo ireo, saingy nohamafisiny fa mbola mijanona ho azo idiran'ireo mpampiasa aterineto ao Iran izy ireo. Nampahatsiahivin'i Jannati ihany koa ny toerana misy ny Filoha Hassan Rouhani mikasika io olana io, tamin'ny filazàna fa tokony halalaka ny fidiran'ny Iraniana amin'ireo tolotra fandefasana hafatra ireo, indrindra fa fantatra tsara ny lazan'izy ireo.
Ny WhatsApp, Line, sy Tango dia manome ny Iraniana ny fitaovana tsy dia lafo vidy handinganana ireo tolotra finday sy hafatra ambany fanarahamason'ny fanjakana, mampifandray ny samy Iraniana sy ny olona any ivelany.
Niaiky i Abbas Jafari Dolatabadi lehiben'ny fampanoavana ao Teheran fa tsy mifanara-tsaina ny governemanta sy ny Fitsarana mikasika ny fanivànana ireo fampiasa, saingy nohamafisiny fa hanatanteraka ilay didy avy amin'ny fitsaràna ny polisy na ho inona na ho inona. Notaterin'ny Mehr News fa ny fitsarana no namoaka ny didy fampiharana ho an'ny Ministeran'ny Teknolojia sy n y Fifandraisana, saingy naaton'ireo manampahefana aloha ny fampiharana azy mandra-pisian'ny marimaritra eo amin'ny governemanta sy ny fitsaràna.
Hoy ny masoivohom-baovao Fars, nilaza i Jannati hoe: “tsy maintsy hampiasa sivana raitra isika mba hanesorana ny votoaty tsy manaraka ny lalàna amin'ireny fampiasa ireny, kanefa hadisoana ny hanakana tanteraka ireny fampiasa ireny.”
Mbola miverimberina ao Iran ny fifanakalozan-dresaka momba ny “sivana-am-pisainana“. Noho ireo sakana ara-teknolojika amin'ny fametrahana ny fanivànana arakaraky ny votoaty ifanakalozana anefa, toa tsy hahavaha ny fifandirana misy ankehitriny eo amin'ny samy mpitàna birao ao Iran ny fomba firoso tahaka izany. Na eo aza ny fibahanana ny YouTube, Twitter, sy Facebook any Iran, betsaka ny Iraniana no mahita làlana handinganana ireny fanarahamaso ireny amin'ny fampiasàna lohamilina “proxy” sy fitaovana fihodinana maro samihafa.